Njem Ozi Email na Igbe mbata | Martech Zone
Anyị na ụlọ ọrụ mba na-ekwurị okwu na webinar ịzụ ahịa ọdịnaya taa imepụta email na arụmọrụ ahịa email agbanweela n'ihi ndị ahịa na-eme yana otu igwe mkpanaka si enye email. Na 30% nke ozi-e na-agụ na a mobile ngwaọrụ, ọ dị mkpa karịa mgbe ọ bụla chepụta gị ozi ịntanetị n'ụzọ kwesịrị ekwesị… na-anwale ha!
Nsụgharị email ka nwere ike ịga na-ezighi ezi, ọbụlagodi na iji ihe ọmụma a. Mee omume nke ịnwale ozi ọ bụla izipụrụ n'ofe ndị ahịa email izizi tupu izipu. Litmus na-enye a ụbọchị 7 email ule ikpe na ndenye aha niile!
Ha etinyekwala ihe omuma a bara uru n’okporo uzo email na-abanye na Igbe mbata, kedu ihe nwere ike imehie, na otu ị gha esi dozie ya!
Tags: nnyefeemailozi nnapụta emailemail njemozi nsụgharịnyocha email